सिभिल बैंकको ऋणपत्र मंसिर २४ गतेबाट बजारमा, ब्याजदर कति ? - Arthasansar
सिभिल बैंकको ऋणपत्र मंसिर २४ गतेबाट बजारमा, ब्याजदर कति ?
विहीबार, १६ मंसिर २०७८, ०६ : ४७ मा प्रकाशित
सिभिल बैंक लिमिटेडले मंसिर १६ गते, बिहीबारबाट ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १० वर्ष अवधिको १०.२५ प्रतिशत व्याजदर भएको ‘सिभिल बैंक डिबेन्चर २०८८’ नाममा ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।
बैंकले प्रतिकित्ता १००० रूपैयाँ अंकित दरमा ३ अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । निष्कासन गरिने कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये बैंकले सर्वसाधारणका लागि १२ लाख कित्ता र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न संघ संस्थालाई १८ लाख कित्ता बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएकोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्याईएको छ ।
बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्नेछ ।
लगानीकर्ताले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पुर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मंसिर २४ गतेबाट निष्कासन गरिने उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा मंसिर २८ गते र ढिलोमा पौष ९ गतेसम्मसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताहरूले लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, सिभिल बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो सेयर मार्फत अनलाईनबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बैंकले प्रकाशन गरेको आह्वानपत्र यस्तो छः
नेपाल लाइफ र एनआईसी एशियाको सेयर फेरि आयो लिलामीमा, यसपटक बिक्ला त ?
सिटिजन लाइफले डाक्यो विशेष साधारण सभा, के-के छन् एजेन्डा ?